sambo, lomano sy ny rano fanatanjahan-tena | Holmbygden.se
Ao amin'ny toerana maro manodidina ny Holmsjön dia tsara maro ho an'ny torapasika mahafinaritra sommarbad. Ny tena Nitsidika dia Västbyn sy Sandnäset.
Amin'ny Sandnäset dia azo atao ihany koa ny manofa fiaramanidina ski, ary isan-karazany ny zavatra hafa.
Ho an'ireo izay te Mitsangantsangana dia faritra Holmsjön farihy lehibe indrindra, tokony ho telo Mil ny lavany, ary 39 km² I faritra. Ny farihy tsara fa lehibe mifanaraka amin'ny rano miala tia manao ski ambony na wakeboarding. Maro ny mponina sy ny trano rantsan-kazo vahiny fahavaratra misafidy ny hanomboka ny sambo tamin'ity fahavaratra ity.
Holm ny rano distrika Jereo ny trondro Map sy mamaky bebe kokoa momba Holms fanjonoana eto.
Tamin'ny toe-po ho fotoana handinihana ny manodidina hitsangantsangana any lakana (Canadian) misy rano mandeha ireny. Avy eo misy ny manofa lakana amin'ny Österström. View tahan'ny sy ny fifandraisana vaovao.
Current haavon'ny rano ao Holmsjön
Holmsjön amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy Leringen mamaritra farihy lehibe drano ho an'ny orinasa sy ny hery voafehin'ny 'ny herin fototra Leringsforsens (Sketch ny rano mikoriana ao amin'ny .pdf eto).
Summertime no Ranomasina Holm rano fari-about 201 metatra ambonin'ny ranomasina, ary nampidina ny ririnina nidina ho any ny 197 m.ö.h.
Jereo ny ankehitriny ny haavon'ny rano eto.
loharano: Water fanaraha-maso ireo orinasa.
Ranomasina Map amin'ny Holm Lake fototra
(Ser du inte kartan nedan kan du behöva högerklicka på en gul list uppe/nere i webbläsaren och välja “Visa blockerat innehåll” na “Tillåt”.)
dia sjökartan i fullskärm eller öppna kartan i Google Maps (innehåller flera sidor).
Araho ny GPS toerana ka jereo sary satria ny telefaonina mampiasa Google Maps.
1. Handefa ny GPS:mg I Din-fiara finday avo lenta (iPhone / Android).
2. Ampidiro ny adiresy etsy ambony ao amin'ny finday navigateur.
3. Raha miakatra ny boaty “Complete asa mampiasa”, Amin'ity tranga ity, “Maps”.
Ankehitriny ianao dia afaka mahita Holm Lake fototra, morontsiraka sy ny toerana amin'ny finday.
Download ny lalana antontan-taratasy isan-karazany noho ny GPS format:dia. High Click, “Save Target Rehefa…”.
Google Earth – Holmsjons_grund_(via_internet).KML (0,1MB) Ny famakiana ny sarintany an-tserasera.
More eo amin'ny sarintany, ary sarintany ny lalana
Holm Lake fototra dia GPS lalana (s.k. “lalana”) izay mampiavaka ny farihy ny antony isan-karazany sy ny morontsiraka. Ny lalana dia afaka mitambatra amin'ny GPS na finday avo lenta nampiasa finday fahavaratra mba tsy noho ny sambo na amin'ny ririnina mba tsy ho vato, na ranomandry manify. Ialao ny tsipika sy ny fitetezam-paritra dia ho azo antoka kokoa! Azo ampiasaina raha jono raha te-hahita indray ny fanorenana teo ny farihy.
Holmsjön no nifehy sy nandatsaka be ny rano amin'ny ririnina. Kart lalana efa atao amin'ny snowmobile manamorona ny farihy ny morontsiraka ririnina. tamin'ny fotoana (Mars 2008) ny farihy dia nampidinina momba 4 m oharina amin'ny rano fahavaratra. Ny firenena manana sisiny tsara raha fikarohana eo amin'ny lalana mba hisorohana satria. Ny sasany amin'ireo fototra tsara dia tsara dia afaka mazava ho azy ho amin'ny lalina feno mbola ampy ny zava-nitranga, rehefa feno farihy mazava.
Ny lalana dia noforonin'i Patrik Wikholm. Hafanàm-po an lalana fikarakarana sy ny famoahana Niklas Wikholm. Subject ny fahadisoana.
Road toe-piainana ao amin'ny faritra dia ahitana fiheverana ... hamaky bebe kokoa
Holms fanatanjahan-tena Club HSK-tombony SMS